लाक्पा फुटी शेर्पा भन्छिन ‘अरु पुस्तकमा हिमाली जीवन यर्थाथ रुपमा पाइएन ।’ « Sherpa media Group Nepal
लाक्पा फुटी शेर्पा भन्छिन ‘अरु पुस्तकमा हिमाली जीवन यर्थाथ रुपमा पाइएन ।’
प्रकाशित मिति : ७ पुष २०७३, बिहीबार १०:०७
लाक्पा फुटी शेर्पा
शेर्पा समुदायमा पहिलो लेखक महिलाका रूपमा परिचित छिन्, लाक्पा फुटी शेर्पा । उनको पहिलो पुस्तक हिमालमा चालीस वर्ष ले पाठकहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया पायो । यो पुस्तक अंग्रेजी भाषामा समेत अनुवाद भइसकेको छ । उनको दोस्रो उपन्यास हो, हिमालकी छोरी । हिमाली जनजीवनका विषयवस्तु समेटिएको यो पुस्तक अझै पाठकका लागि रुचिको विषय हुने उनले अपेक्षा गरेकी छिन् । उनी पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पनि हुन् । लाक्पाफुटीसँग गरिएको कुराकानी :
कसरी पुस्तक लेखनतिर आकर्षित हुनुभयो ?
नेपालका विषयवस्तुबारे विदेशी लेखकले लेखेका पुस्तकहरूमाथि हामीले निर्भर हुनु परेको छ । हिमाली क्षेत्रबाट नेपालीहरूले नै लेखेको कमै पाइन्छ । नेपालीहरूले जति विदेशीले गहिराइमा बुझेका हुँदैनन् । कथा कि त वास्तविक हुनुपर्छ कि त लेख्नै हुन्न । त्यही मान्यताले म लेखनमा आकर्षित भएँ ।
भनेपछि, नेपालका हिमालबारे विदेशी लेखकहरूले लेखेका पुस्तकमा केही कमी छ ?
विदेसी लेखकहरू दुई हप्ता हिमाली भेग घुमेकै भरमा पुस्तक लेख्छन् । उनीहरूले विषयवस्तु, त्यो परिवेश राम्रोसँग बुझेकै हुँदैनन् । हामी त्यही ठाउँमा जन्मियौं, हुर्कियौं, भारी बोक्यौं, पर्यटन क्षेत्रमै होमियौं । हाम्रो बुझाइको दायरा फराकिलो हुन्छ । र, हामीले लेख्दा विस्तृतमा लेख्न सक्छौं । विदेशीहरूको लेखनमा वास्तविक अनुभूति भेटाइदैन तर हामीले लेख्दा हाम्रो भाबना र भोगाई पनि जोडिएर आउँछ ।
विदेशीहरूसँग तपाईंको बाक्लो संगत र सम्पर्क छ । नेपालबारे उनीहरूको चासो केमा पाउनुहुन्छ ?
हिमाल र यहाको संस्कृतिबारे । तर, कतिपय अवस्थामा उनीहरूकै कारण नेपालबारे गलत सूचना पनि गएको छ ।
तपाईलाई कस्ता खाले पुस्तक पढ्न मनपर्छ ?
हिमाल, पर्यटन र आरोहीहरूबारे लेखिएका पुस्तक पढ्न मनपर्छ । यिन विषयवस्तुहरू समेटिएका मसँग थुपै्र फ्रेन्च, अंग्रेजी पुस्तकहरू छन् । कति उपहारका रूपमा पाए, कति आफैंले किनें । यसबाहेक मलाई आत्मकथा र उपन्यास पढ्न मनपर्छ । सरल भाषामा लेखिएका पुस्तक जसबाट केही सिक्न सकियोस् ।
तपाईंलाई मन परेको पुस्तक ?
एक जना चाइनिज महिलाले लेखेको पुस्तक स्वान । यसमा तीन पुस्ताको कथा छ । मैले यो पुस्तक दुई चोटी पढें । तै पनि भर्खरै पढे जस्तो लाग्छ । कलाकार हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मानिस पनि मनपर्‍यो । उहाँको व्यक्तित्व जति सरल छ, पुस्तकको लेखनशैली पनि त्यति नै सरल र मीठो छ ।
पुस्तकमा कत्तिको लगानी गर्नुहुन्छ ?
वार्षिक त्यस्तै १० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । मैले पुस्तक पढिसकेपछि अरूलाई पढ्नका लागि दिन्छु । मैले बढी मात्रामा पुस्तक नै उपहार दिन्छु ।
कुन समयमा लेखपढ गर्न रुचाउनुहुन्छ ?
बिहानको समयमा पढ्न, रातिको समयमा लेख्न रुचाउँछु । केही कुरा मनमा आयो भने टिपेर राख्ने बानी छ ।
आफ्नो पुस्तकबारे कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
कसैले भनेको थियो, हिमालमा चालीस वर्ष पढेपछि कतिलाई रुवाउनेछ । तर, मलाई विश्वास थिएन । यतिबेला मैले त्यही भोगिरहेको छु । मलाई भेट्नम आएका केही पाठक आफ्नै आँखाअघि रोएको पनि देखेकी छु ।
मेरै जस्तो दु:ख भोग्नु भएको रहेछ भने । कतिले रुँदै हसाउने, हास्दै रुवाउने खालको रहेछ भने । त्यस्तै हिमालकी छोरी पढेर पनि राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेकी छु ।